Urrurada Bulshada Rayidka oo baaq kasoo saaray khilaafka Farmaajo & Rooble – Radio Daljir
Seteembar 14, 2021 10:56 b 0
Urrurada Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxaa ay walaac xoogan ka muujiyeen khilaafka aan weli xalka laga gaarin ee u dhaxeeya Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Qoraal ay soo saareen Urrurada Bulshada rayidka ayaa waxaa ay ku sheegeen inay aad uga xun yihiin is afgarad la’aanta madaxda dalka ee la xiriira khilaafka awoodaha sharciya dowladadeed ee soo kala dhex galey labada mas’uul ee Farmaajo iyo Rooble.
Sidoo kale Urrurada Bulshada rayidka waxaa ay sheegeen in Khilaafka siyaasadeed ee madaxda dalka uu niyadjab ku ridey Dadka Soomaliyeed oo
filaayey in dalka ay ka qabsoomaan doorashooyin si nabad ah ku dhaca dalkana u horseeda
isbedel wanaagsan oo horumar leh.
“Bulshada rayidka waxa ay aaminsan tahay in khilaafka siyaasadeed saameyn ku yeelan karo
hay’adaha dowlada si taas looga waantoobo waxaa lagama maarmaan ah in madaxda dalka
ay muujiyaan mas’uuliyad dheeri ah oo lagu xakameenayo khilaafka siyaasadeed oo u eg mid
gacanta ka sii baxayo ayaaagu yiri” Qoraalka Urrurada Bulshada ragidka.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen inay welwel weyn ka muujinayaan saameynta uu khilaafka siyaasadeed ku keeni karo geedi socodka doorashooyinka, nabada iyo degenaashaha dalka iyo nolasha shacabka Soomaliyeed oo waqti adag ku jira.
Ugu dambeyn Urrurada Bulshada rayidka ayaa waxaa ay soo bandhigeen Afar qodob oo xal u noqon kara khilaafka Madaxda dowladda iyo dhameynta kiiska Ikraan Tahliil, kuwaas oo kala ah.
1. In arinta Ikraan Tahliil aanan la siyaasadeen, waxaana soo jeedineyna in baaritaan dhab
ah lagu sameeyo loona madaxbaneeyo maxkamada ciidamada ee dacwada Ikraan gacanta ku hayso.
2. In uusan marnaba istaagin wada hadalka u dhaxeeya madaxda dalka si loo dhameeyo
khilaafka siyaasdadeed ee la xiriira awoodaha sharciga.
3. In aanan la abuurin caqabado is hortaag ku sameyn kara geedi socodka doorashooyinka.
4. In hogaamiyeyaasha ay danta guud ka hormariyaan danaha gaarka ah iyo kala aragti
Ugu dambeyn Bulshada rayidka ayaa waxaa ay ugu baaqeen duubabka Soomaliyeed, odoyaasha dhaqanka, culumo u diinka, wax garadka, haweenka iyo aqoonyahanada Soomaliyeed in ay u istaagan sidii loo heli lahaa xal dhab ah oo lagu xaqiijinaayo dhameystirka khilaafka siyaasadeed.
Warkaan kasoo baxay Urrurada Bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli uu jiro khilaafka u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, kaas oo ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil.
MARTISOOR – TAXANAHA 6aad ee CAASHA GEELLE: Muxuu noqon doonaa Mustaqbalka Garoonka Cawaale Kadib Wareejintii maduuliyadiisa ee Gudiga dhisay (daawo)